#သူများတွေ သိကုန်ပြီ ကိုယ်သိဖို့ပဲ လိုတော့တယ်
ဒီနေ့ ဘီဘီစီ သတင်း ဖတ်ရင်း က စိတ်ဝင်စား စရာ သတင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်ဖြစ် ပါတယ်။ အင်္ဂလန် မှာ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် နောက်ပိုင်း ခေတ် စား တဲ့ ဘဏ်ချေးငွေနဲ့ အိမ်ကြီးကြီး ကားကောင်းကောင်း တွေဝယ်ပြီး နေ တဲ့လူနေမှုပုံ […]
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစဉ့်ကူးမြို့နယ် ညောင်ပင်ပုကျေးရွာတွင် မိုးတွင်းကာလ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးစဉ် လမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ရန်အတွက်အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးနှင့် အလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးရာ အလုပ် သမားများအားမန္တလေးတောင်ခြေတွင် တည်းပြီးမြို့တွင်းလမ်းများပြင်ရန်နှင့်ပြီးစီး ပါကကျောက်ဆည်မြို့အထိပြင်ရမည်ဟု ပြောဆိုပြီးသဘောတူစွာပြောဆိုကြပါသည်။ 31-8-2016 နေ့တွင်အလုပ်ခွင်သို့ သွားရန်အတွက် အလုပ်သမားကိုယ်စား လှယ်မှကျောက်မြောင်အထိလိုက်ပို့ပြီး အခြားကိုယ်စားလှယ်(ရွာသူ/သား များမ သိရသော)တစ်ဦးအားလွှဲပေးခဲ့ပါသည်။ ကျောက်မြောင်းမှကားဖြင့်ခရီးဆက်ပြီး မိတ္ထီလာအရောက်တွင် ကားတစ်စီးပြောင်း၍စီးစေပါသည်။ကျောက်ဆည်ကျော်လာ […]
ဒါလေးတွေမှ မလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ တကယ် မချစ်လို့ဘူးလို့သာ မှတ် မလိမ်ဘူး အတည်ပြောနေတာ 😁😁
👉ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့သူ👈 -1-မနက်လင်းတာနဲ့ ဖုန်းဆက်န်ိုးတယ် mess ပို့တယ် 2-သူကြိုက်တဲ့အရာထက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရာက်ို ဦးစားပေးတယ် 3- ညဘက် စောစော အိပ်ခိုင်းမယ် မနက်စောစော ထပြီး အစားစားခိုင်းမယ် 4- အစားမစားရင် မကြိုက်ဘူး . အမြဲ စိတ်ပူပြီး လိုက်ပြောနေမယ် 5- လှလှပပ […]
ကင်ဆာဆိုတာ လုံးဝ ကြောက်စရာ မဟုတ်တော့တဲ့ နည်းပညာသစ်ကို တီထွင်နိုင်ပြီ။
သွေးထဲကို ပစ်ထည့်လိုက်တဲ့လေဆာရောင်ခြည်ဟာ သွေးထဲမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ရှာဖွေပြီး တွေ့တာ နဲ့ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ကုထုံးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အာကင်ဆောပြည်နယ် University of Arkansas ရဲ့ Nanomedicine Center မှ သုတေသီအဖွဲ့က ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ ကင်ဆာဝေဒနာရှင် ၂၈ ဦးကို ဒီကုထုံးနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရာမှာ ၂၇ […]
အဆိပ်ပင်ကျိုပြီး သားသမီးတွေကိုတိုက် နောက်ဆုံးကိုယ်တိုင်သောက်ခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့အဖြစ်
၁၃.၉.၂၀၁၉ ရက်နံနက် ၀၇၄၅ အချိန်ခန့်ကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့၊ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်ရဲစခန်း၌ ဒုရဲအုပ်ကျော်နိုင်တာဝန်မှူး၊တာဝန်ဆောင်ရွက်စဉ် … မိုင်းဖြတ်မြို့ ဈေးတန်းကွက်သစ်ရပ်ကွက်နေ ရာအိမ်မှူး ဦးထွန်းလွင်မှဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားသဖြင့်ရဲစခန်းအရှေ့မြောက်ဘက်(၄)ဖာလုံခန့်အကွာ ၊မိုင်းဖြတ်မြို့၊ရေတန်း(ကွက်သစ်)ရပ်ကွက်၊ စိတ္တသုခ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့နေ အားမာ၏နေအိမ်တွင် မိသားစု (၄) ဦး အဆိပ်သောက်သေဆုံးနေကြောင်း သတင်းအရ မနရမှူး ရဲမှူး ကျော်နိုင်၊ မမစမှု ဒုရဲမှူး […]
အရမ်းကိုကြည့်ချင်နေပါပြီဏော်“စပွန်ဆာ” ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ယောကျာ်းပိုင်းလုံးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် သရုပ်ဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေ်န့မှာ စတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ကားဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားကတော့ ထပ်ပြီးတော့ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ ယောကျာ်းပိုင်းလုံးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် သရုပ်ဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ “စပွန်ဆာ” ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ နေတိုးက အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ရဲလေး၊ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊မြတ်ကေသီအောင်တို့က နေတိုးနဲ့အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ “စပွန်ဆာ” ရုပ်ရှင်ကားကတော့ သူတို့ရဲ့ ဖေစ်ဘုတ်ကနေ သူတို့ရုပ်ရှင်ရဲ့ ပိုစတာဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ကာရိုက်တာတွေကို […]
ဖြိုးမြတ်​​အောင်​ကို မြမြ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကမင်းသားအဖြစ်​ ​တရားဝင်​​ကြေငြာလိုက်ပါပြီ
ဗစ်တိုးရီးယားလေးက သူ့ကို ပြုလုပ်သူဟာ ကိုကိုအငယ်နဲ့ ကိုကိုအကြီး ဖြစ်တယ်လို့ တရားခွင် စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ တရားလိုရှေ့နေ ဒေါ်ရွက်နုအောင်က ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ တရားရုံးမှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးကို ဥပဒေအရာရှိနဲ့ တရားခံလို့ စွဲဆိုခံထားရသူ ကိုအောင်ကြီးရဲ့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင် ဇော်က စစ်ဆေးမေးမြန်းရာမှာ အဲဒီလိုထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။ ဗစ်တိုးရီးယားကို […]
မရောက်တာကြာတဲ့ရွာကိုပြန်အရောက်မှာ ကိုယ့်အုတ်ဂူကိုကိုယ် ပြန်တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့ရကြောင်
ထိုင်းနိုင်ငံက ကျေးလက်နေအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အခြားဒေသကို နှစ်တော်တော်ကြာအောင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်မှာ သူ့ကို ဆွေမျိုးတွေက သေပြီဆိုပြီး သင်္ဂြိုဟ်ထားတာကိုသိလိုက်ရလို့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့ရကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ရွာကဆွေမျိုးတွေက သူ့ကို သင်္ဂြိုဟ်ထားတာ ခြောက်လအထိ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပြီး၊ သူ ပြန်ရောက်လာတော့ အားလုံး ကြောင်စီစီနဲ့ မှင်သက်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ […]
ပရိသတ်တွေအတွက် ချစ်သူကို ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ မြတ်ကေသီအောင် ရဲ့အကြောင်သူ့ချစ်သူ ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ြ
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မြတ်ကေသီအောင် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးပါ။ သူမ သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားများစွာ ရှိပြီး ခုအချိန်ထိ ငယ်ရွယ်နုပျိူ နေတဲ့ သူမကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ချစ်သူကို […]
သင့်မှာရည်းစားဟောင်းမရှိဖူးဘူး၊ အခုချစ်သူဟာ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးရည်းစား ဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကို မဖြစ်မနေ ဖတ်သင့်ပါတယ်နော်။
ရည်းစားစထားခါစ မိန်းကလေးတို့ မဖြစ်မနေသိထားရမည့် အရေးကြီးဆုံး အချက်(၅)ချက် ….. သင့်မှာရည်းစားဟောင်းမရှိဖူးဘူး၊ အခုချစ်သူဟာ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးရည်းစား ဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကို မဖြစ်မနေ ဖတ်သင့်ပါတယ်နော်။ (၁) သူပြောသမျှကိုမယုံပါနဲ့ သင့်ချစ်သူကို ယုံကြည်တာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အရာတွေကိုတော့ ဥာဏ်လေးနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီး စဉ်းစားသင့်တယ်နော်။ လူ့စိတ်ဆိုတာ စက္ကန့်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတာကြောင့် […]
ဆီးအိမ်မှ ဆီးမထွက်ခြင်းနဲ့ ဓမ္မတာလွန်ခြင်း ရောဂါတွေကို ၁၅ မိနစ်အတွင်း ထိထိရောက်ရောက် ကုသပေးနိုင် ပါတယ်။ဆေးနည်မိန်းကလေးတွေကတော့ သွေး ကောင်းမယ်ဆို ဘာရောဂါမှအလွယ်တကူမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူ
“အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ” ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတစ်ပါး..တဲ့ အာရောဂျံ = အနာရောဂါ၊ ပရမံ = မြတ်သော၊ လာဘံ = လာဘ်မည်၏ …လို့ မြန်မာ့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်…ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ဘဝမှာ အကြီးမားဆုံးသော ဆုလာဘ်တစ်ခုပါပဲ…ကျန်းမာမှ စားချင်တာစားနိုင်၊ သွားချင်တာ သွားနိုင်၊ လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင် မယ်လေ…. အဲဒီ့အတွက် […]
ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ကို ဒဲ့ရှင်းချင် ရှင်းလို့ရတယ်လို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို 👇😱👇ပညာပေးဇာတ်ကားလား၊ လိင်အသားပေးဇာတ်ကားလာမုဒိမ်းကျင့်တဲ့သရုပ်ဖော်ပြတာကို လူရွေးပွဲလုပ်ကြသတဲ့……။
September 16, 2019 thutashwekyal 0
ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ကို ဒဲ့ရှင်းချင် ရှင်းလို့ရတယ်လို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို ….. 👇😱👇 ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်၏ မြမြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ရွေးချယ်ပွဲ၌ စင်ပေါ်တွင် မုဒိမ်းမှုသရုပ်ဆောင်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်၍ ပန်ဆယ်လိုက စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် “ မုဒိမ်းမှုတွေ ပေါများနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ ဇာတ်ကွက်အား စင်ပေါ်တက်ပြီး […]
မနက်ဖြန်ပဲ စမ်းကြည့်မယ် 👍 မျက်နှာကို ခဏတာသာ ဖြူဝင်းစေတာမဟုတ်ဘဲ ထာဝရဖြူစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလို့တောင် တင်စားကြပါတယ်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ထူးထူးဆန်းဆန်း မျက်နှာကို သိသိသာသာဖြူစေတဲ့ အာလူးပြုတ်အစွမ်း ဒီတစ်ခါတော့ ဈေးကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ အလှကုန်တွေ သုံးစရာမလိုဘဲ မျက်နှာအသားအရေကို သိသိသာသာ ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့် မှော်ဆန်ဆန် အာလူးပြုတ်နည်းလမ်းအကြောင်း မျှဝေပေးပါရစေ ။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ သင့်မျက်နှာကို ခဏတာသာ ဖြူဝင်းစေတာမဟုတ်ဘဲ ထာဝရဖြူစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလို့တောင် တင်စားကြပါတယ် ပထမဆုံး […]
အက်ဆစ်ဖြင့် လောင်းသည့် အမျိုးသမီး (၂) ဦးအား ထောင် (၁၅) နှစ် အမိန့်ချ.ယုတ်မာရက်စက်ချက်ဗျာ 😱👇😱
အိမ်အကူ မိန်းကလေးကို အက်ဆစ်ဖြင့်လောင်းသည့် အမျိုးသမီး (၂) ဦး အား အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၅) နှစ် ကျခံရန် အမိန့်ချ … စက်တင်ဘာ ၁၆။ မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်တစ်ခုအတွင်း အိမ်အကူအဖြစ် အလုပ်ကိုင်သည့် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို အက်ဆစ်ဖြင့်လောင်းခြင်း၊ မျက်စိကွယ်အောင်လုပ်ခြင်း […]
အမှတ်တမဲ့ စူပါဂလူးကပ်သွားမိရင် ဘယ်လိုပြန်ခွာရမလဲ ဖြေရှင်းနည်
စူပါကလူးအကြောင်းကိုတော့ APANNPYAY ပရိသတ်တွေ သိကြမှာပါ။ လက်မှာ မတော်လို့များကပ်သွားရင် ခွာရအခက်၊ ပူစပ်ပူလောင်နဲ့ အသားတွပါ ပဲ့ပါတတ်လို့ ဂရုစိုက်မှ တော်ကာကျတဲ့ အရာပါ။ အခုတစ်ခေါက်ပရိသတ်တွေကို ပြောပြမယ့် နည်းလမ်းလေးက စူပါကလူးလက်မှာ ကပ်သွားရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာပါ။ ဒီနည်းကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ထားပြီး၊ ဗီဒီယိုနဲ့ပါ သရုပ်ပြထားလို့ ပရိသတ်တွေ မှန်မှန်ကို […]